Linn Ko: February 2013
iTunes ကို Download ဆွဲချင်နေတယ့် သူတွေ အတွက် Official Link ပါ....ကိုယ်တိုင် Official Site ကို
သွားပြီး Download လုပ်နိုင်သလို ဒီက နေလည်း တစ်ဆင့်သွားလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ....
လာလည်တယ့် သူတွေကို ကျေးဇူးပါနော်....
Posted by Linn Ko at 10:27 AM No comments:
CCleaner 3.28.1913(Latest Version)
CCleaner Latest Version ပါ...သုံးဖူးနေကြသူတွေ ဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ အသိဆုံးပါ...
မသုံးဖူးတယ့် သူဆိုရင်တော့ စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့...စက်မြန်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်...Virus ကိုက်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတယ့် Registry ပြောင်းလဲ ခံရတယ့် ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း ပြန်လည် ပြင်ဆင်
အရင်ကလည်း တင်ပေးဖူးလို့ Hiren's Boot CD ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်...
မသိသေးသူတွေ လည်း သုံးကြည့်ပေါ့ နော်... Computer Service သမားတွေ အတွက်တော့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ...မရှိမဖြစ် တစ်ခုလိုလဲ အသုံးဝင်ပါတယ်...အခုကတော့ အပိုင်း သုံးပိုင်း ခွဲပြီး
Posted by Linn Ko at 12:33 PM No comments:
For Android Free Games and Application
Android သုံးတယ့် သူတွေ အတွက်ပါ... အသိမဖြစ်လေးတွေ ပါ...Free Game တွေ Download ဆွဲဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Free Application တွေ Download ဆွဲဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေအောင်ပါ...Phone တွေရဲ့ Details
တွေကို ကြည့်လို့ရတယ့် Website တစ်ခုလဲ ထည့်ပေးထားပါတယ်...အချက်အလက်တွေကို စုံ
Posted by Linn Ko at 11:33 AM No comments:
Snipping Tool For Screen Shot (Easy Way)
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့် Computer ရဲ့ မျက်နှာစာကို Screen Shot ရိုက်ချင်တတ်ကြပါတယ်...ဒါပေမယ့်
ဘာကို သုံးလို့ သုံးရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတယ့် သူတွေ အတွက်ပါ...တကယ်တော့ Windows OS သုံးနေသူ
တွေအတွက် ScreenShot ရိုက်ဖို့ Tools က အဆင်သင့် ပါပြီးသားပါ...မသိကြလို့သာ အခက်တွေ့နေ
Posted by Linn Ko at 5:13 PM No comments:
Disco Keyboard LED
ပျော်စရာအတွက် သက်သက်ပါ....Keyboard က မီးလေးတွေ သူ့အလိုလို လင်းလိုက် မှိတ်လိုက် ဖြစ်အောင် လုပ်တာပါ...
VBScript နဲ့ ရေးထားတာပါ....သူ Run နေတုန်းတော့ Keyboard က ဘာမှ ရေးလို့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး...ဒါပေမယ့် ပြန်ပိတ်တယ့် နည်းလေးပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်... Alt+Ctrl+Del နှိပ်လိုက်ပါ..
Posted by Linn Ko at 2:23 PM No comments:
Developer Tools တစ်ခုပါ...သာမာန် Notepad တစ်ခါမှာ ပါတယ့် Function တွေထက် အများကြီး ပိုပါသလို အသုံးပြုလို့လည့် ပိုကောင်းပါတယ်...ပုံစံလည်း ပိုလှသလို Programming Coding တွေကို
လည်း အတော်များများ Support လုပ်ပါတယ်... Free Application ပါ..သူ Original Website က
Posted by Linn Ko at 12:55 PM No comments:
God Mode ဆိုတာကတော့ Windows မှာ လူတိုင်း မသိကြသေးတယ့် Secret Code လေးတွေပါ...
အဲ့ဒါလေးတွေ သုံးပြီးတော့ ဖျောက်လို ဖွက်ထားလိုတယ့် ကိုယ့်ရဲ့ Folder လေးတွေကို ဖျောက်ထား ဖွက်ထားလို့ ရပါတယ်....နံပါတ်လေးတွေ ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ ဖွင့်လို့မရအောင်လုပ်တာမျိုးကို ကျွန်တော်တို့
Posted by Linn Ko at 12:22 PM No comments:
Windows Shutdown မြန်အောင်လုပ်မယ်
Windows Shutdown မြန်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကို ရေးချင်ပါတယ် အရင် RUN Box ကိုဖွင့်လိုက်
ပါ... Windows Key+ R ပါ.. ပြီးတော့ RUN Box မှာ regedit ကိုရေးပြီးတော့ Enter ပေးလိုက်ပါ..
Posted by Linn Ko at 1:19 PM No comments:
iPhone တွေမှာ Android Install လုပ်မယ်
ဒီနည်းကတကယ်တော့ နှစ်နည်း ထက်ပိုပြီး ရှိပါတယ် နည်းတွေ များစွာထဲကနေ ကျွန်တော် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် နည်းတစ်ခုရွေးပြီး ပြောပေးထားပါတယ် အတန်းစား အားလုံး အဆင်ပြေ အောင်လို့ပါ... မတူညီတာကို အတင်းဇွတ် လုပ်ခိုင်းနေရင် ပြသနာက ရှိလာနိုင်တာမို့
Posted by Linn Ko at 12:45 PM No comments:
သူငယ်ချင်းတို့ စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် စကားပြောပြီး ကွန်ပြူတာ ကို ခိုင်းကြည့် ရအောင် ဆော့ဝဲလ်မလိုပါဘူး ၀င်ဒိုးမှာပါပြီးသားကို အသုံးချခြင်း ဖြစ်ပါသည်..
ကျနော်ဒါကို ကလိနေတာတော့ တော်တော်ကြာပြီး။အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ကွန်ပြူတာ ကို စကားပြောပြီး
Posted by Linn Ko at 12:30 PM No comments:
Defraggler ဆိုတာကတော့ ကိုယ့် Computer ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ တိုးတတ်လာစေဖို့ (မြန်စေဖို့)
လုပ်ပေးတယ့် Tools တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်..Computer မှာ Data တစ်ခု မှတ်လိုက်တယ့် အခါ မှာ Hard Disk က အဆင်ပြေတယ့်နေရာမှာ မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်...Defraggment လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့
Posted by Linn Ko at 11:53 AM No comments:
Windows မှာ Password ကို မေ့သွားလို့ Password ပြန်ပြောင်းချင်သူတွေ အတွက်ဆို အဆင်ပြေပါတယ်
..Hiren's Boot CD ကိုလဲ တစ်ခွေလုံး Download ဆွဲနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့..Password Remover Tools တစ်ခုတည်း သုံးမှာဆိုရင် အဆင်ပြေအောင် တစ်ခုတည်း တင်ပေးထားပါတယ်...ISO ဖိုင်ဆိုတော့
Posted by Linn Ko at 11:16 AM No comments:
Hiren's Boot CD ဆိုတာကတော့ အလွန့်အလွန် ကို အသုံးဝင်တယ့် အခွေ အမျိုးအစားလေးပါ...
သူ့မှာ Hard Disk ကို Partation ပိုင်းတယ့် Tools တွေ...Windows Password ကို မေ့သွားရင် Password ဖောက်တယ့် Tools တွေ...Hard Disk မကောင်းတော့ရင် Bad Sectors Recovery လုပ်တယ့်
Posted by Linn Ko at 2:53 PM No comments:
Cyberlink You Cam 5
Cyberlink You Cam ကတော့ Effect ပေါင်းများစွာပါဝင်တယ့် Webcam Manager တစ်ခုပါ....Webcam တပ်ဆင်ထားပြီ ဆိုတာနဲ့ သူ့ကို ဖွင့်ပြီး အသုံးပြုရုံပါပဲ...အပျော်ပဲဖြစ်ဖြစ် အတည်ပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့ကောင်းပါတယ်....Function လဲ အတော်စုံလင်ပါတယ်...Download ကိုတော့ အောက်က Link
Team Viewer 8 + Manual
ဒါကတော့ ဟိုဖက်က ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးကို အခြားတစ်နေရာကနေပြီးတော့ ထိန်းချုပ်တယ့်နေရာမှာ အသုံးပြုတယ့် Software ပါ...Manual ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်..သူ့ Official Website ကနေပြီးတော့ Download ဆွဲလဲ ရပါတယ်...ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့် Site ထဲမှာတင် ဆွဲသွားလို့ ရအောင်
Posted by Linn Ko at 12:23 PM No comments:
iTools ဆိုတာကတော့ Apple ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်တယ့် iPhone ,iPad နဲ့ iPod တို့ ကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးတယ့် Tool လေးပါ...Apple ပစ္စည်း သုံးသူတိုင်း iTunes ကိုတော့ သိကြမှာပါ...ပုံမှန်အတိုင်းကတော့ iTunes နဲ့ ချိတ်လို့ရပါတယ်...ဒါပေမယ့် iTools က တစ်ချို့
Posted by Linn Ko at 12:13 PM No comments:
Windows 8 ကို USB မှ Install လုပ်ချင်ပါတယ် ဆိုတယ့် သူတွေ အတွက် ပါ....စမ်းတော့ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး..သူ့ထဲမှာတော့ သုံးနည်းလေး ပါတယ်..စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ..အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ
Download လုပ်ချင်သူတွေ အတွက် ဒီမှာပါ...
Password တောင်းရင် linnko လို့ထည့်ပေးပါ..
VMware Workstation9Full
VMware Workstation ဆိုတာကတော့ ကိုယ်သုံးနေတယ့် OS အပေါ်မှာ နောက်ထပ် OS တွေ ထပ်ထပ် တင်နိုင်အောင် အသုံးပြုတယ့် Software ပါ...အဲ့ဒီ Software ကိုဖွင့်ပြီးတော့ သူ့ထဲမှာ Linux တို့ လိုမျိုး OS တွေကိုလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...တကယ့် နောက်ထပ် OS တစ်ခုကို သုံးနေရသလိုကို
PDF Reader ပါ....PDF ဖိုင်တွေကို ဖတ်လို့ Appliaction လိုအပ်နေသူများ အတွက်ပါ...သူ့ Official Website ကနေလဲ ရယူနိုင်ပါတယ်...ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိတာ တင်ပေးတာပါ...
အခု လက်ရှိ နောက်ဆုံးထွက်ထားတယ့် Version ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Download
Posted by Linn Ko at 1:40 PM3comments:
Windows XP မှာ ကျွန်တော် ကြုံဖူးတာလေးပါ....MSE ခေါ် Microsoft Security Essential ဆိုတယ့် Microsifot ကအလကား ပေးတယ့် (Update အမြဲတမ်း အလကားရတယ့်) Antivirus ကို Windows XP မှာ တင်တယ့် အခါမှာ တစ်ခါတစ်လေ Genuine မဖြစ်လို့ တင်မရတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်...
Player တစ်ခုပါပဲ.....အကောင်းဆုံး Player တွေထဲကမှ တစ်ခုပေါ့....ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုနေသူတွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားလို့ ထင်ပါတယ်....Video Format အတော်များများကို ဖတ်ပါတယ်...ဒီဇိုင်းလေးက
Posted by Linn Ko at 3:51 PM No comments:
FoxitReader545.0114 (PDF Reader)
PDF Reader တစ်ခုပါပဲ... Adobe Reader တို့လိုပေါ့.... သုံးလို့တော့ ကောင်းပါတယ်...
Download လုပ်ချင်သူတွေ အတွက် ဒီမှာနှိပ်ပါ...
Posted by Linn Ko at 3:25 PM No comments:
Multimedia Player Full Version လေးပါ...သုံးဖူးသူ အတော်များများ နှစ်သက် သဘောကျ ကြပါတယ်..
Password တောင်းရင် linnko လို့ထည့်ပေးပါ...
Posted by Linn Ko at 3:03 PM No comments:
HDD Low Level Formatter 4.25
Hard Disk တွေ Memory Stick တွေ ပျက်မလိုဖြစ်တယ့် အခါမျိုးမှာ ဒီလို Tools တွေနဲ့ Format ရိုက်လိုက်ရင် ပြန်ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်...အမြဲတမ်း ပြန်ကောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး...
ပြန်ကောင်းသွားတတ်တာပါ... HDD Low Level Formatter နဲ့ တူတယ့် အခြား Tools တွေလည်း
Posted by Linn Ko at 2:44 PM No comments:
Folder to ISO(Image Creator)
အရင်က ကျွန်တော် တို့ အခွေကူးဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သိမ်းထားတယ့် ဖိုင်တွေကို Virus ကိုက်မှာစိုးလို့ WinRAR သို့မဟုတ် Image ဖိုင်တွေ အဖြစ် သိမ်းထားလေ့ရှိပါတယ်...(Image အမျိုးအစား တော်တော်များများမှာလဲ ISO အဖြစ် Image ရိုက်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ)...ကျွန်တော်
Disable Command Prompt(cmd)
သူကတော့ Windows ရဲ့ အရေးကြီးတယ့် အရာတစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်.... သူ့ဆီကနေ ပြီးတော့ အရာတော်တော်များများကိုလုပ်လို့ရတယ်..ဥပမာ သင်ဖျက်လို့မရတယ့် ဖိုင်တစ်ခုကို အဲ့ဒီကနေ ဖျက်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်... Run နေတယ့် Programs တွေကို ရပ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်... Copy
Posted by Linn Ko at 12:57 PM No comments:
Folder Options ကို ဖျောက်ဖို့ အတွက်ပါ....Windows7တို့ Xp တို့မှာ သုံးလို့ ရပါတယ်...
ကွန်ပြုတာကို သာမာန်ထက် ပိုသုံးတယ့် သူတွေ ဆို သိမှာပါ...Folder Options ကနေပြီးတော့ ဖျောက်ထားတယ့် ဖိုင်တွေဆို ပြန်ဖော်လို့ရတယ်...ပြီးတော့ Extension တွေ
Posted by Linn Ko at 12:20 PM No comments:
Windows7ဆိုလို့ ဘာထူးဆန်းသလဲလို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်...Download လုပ်ကြည့်ပါဦး.....
သူ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဖိုင်ဆိုဒ် အရမ်းသေးနေတာပဲ...ဖြည်လိုက်ရင်တော့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးပါတယ်...
ဒါပေမယ့် Windows7Installer ဖိုင် တစ်ခုလုံးကို RAR နဲ့ ချုံ့ထားတာ 9MB လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာ
Posted by Linn Ko at 11:42 AM No comments:
Advanced Batch To Exe
Batch file programming ကိုသိပြီးသား သူတွေ အတွက်ပါ...ဒါကတော့ Batch File ကို EXE အနေနဲ့ Run စေလိုရင် သုံးလို့ရပါတယ်....ရေးထားတယ့် Command တွေကို သူများတွေ ကြည့်လို့ မရတော့ဘူးပေါ့...ကောင်းတယ့် နေရာမှာ သုံးရင်တော့ ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာ
Posted by Linn Ko at 11:14 AM No comments:
Converter Software လေးပါ....Format တော်တော် စုံစုံကို ပြောင်းလို့ ရပါတယ်...Audio Files, Video Files, Picture Files စသည်ဖြင့် File အမျိုးအစား အတော် များများကို လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့ကိုပြောင်းလို့ ရပါတယ်....User အတော်များများ သုံးဖူးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ....အရမ်းကောင်းသလို အရမ်းလည်း
Posted by Linn Ko at 4:52 PM No comments:
SnapPea (English Version)
ဒီ Software လေးကတော့ Android ဖုန်းတွေ ကို PC နဲ့ ချိတ်ဆက်တယ့် နေရာမှာ သုံးတာပါ.....အဲ့ဒီ Software လေးကို မိမိ ကွန်ပြူတာမှာ တင်လိုက်ရုံပါပဲ... ပြီးရင် ကိုယ် အသုံးပြုမယ့် Handset(Android) နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်...ကွန်ပြူတာမှာ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားဖို့တော့
Posted by Linn Ko at 10:37 AM No comments:
ဒီ Software လေးကတော့ အခွေတွေကို Memory Stick ခေါ် Pen Drive မှ Run လို့ရအောင် လုပ်တယ့် Software လေးပါ..Windows တွေကို Stick ကနေပြီး တင်မယ်ဆိုလည်း ဒီ Software လေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...အခွေတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်...လုပ်ဖို့ လိုတာလေးတွေတော့
Posted by Linn Ko at 1:04 PM No comments:
Folder Lock လေးပါ...သင် ဝှက်ထားချင်တယ့် Folder လေးတွေကို သူ့ထဲ Add ထားလိုက်ရင် ရပါပြီ...Password ကတော့ ကြိုက်တာပေးထားပေါ့...Full Version ပါ.. Serial Key ထည့်ပေးထားပါတယ်............သုံးကြည့်ပါ............. ကြိုက်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်...အရမ်းကောင်း
Posted by Linn Ko at 12:50 PM No comments:
Dream Scene Seven
ဒီ Software လေးကတော့ Windows7မှာ သုံးတယ့် Software လေးပါ... ကိုယ့် Windows လေးကို လှစေချင်တယ့် သူတွေ အတွက်ပါ...သူက Video ဖိုင်တွေကို Background ထားချင်သူတွေ အတွက်ပါ..အရင်ဆုံး Software ကို Install လုပ်ပါ....Background ထားချင်တယ့် Video ဖိုင်ရဲ့
Posted by Linn Ko at 12:38 PM No comments:
USB Enter (Password Protected USB)
USB Stick တွေမှာ Password ခံတယ့် Software ပါ...သူ့ကို Install အရင် လုပ်ပါ...ပြီးရင် Desktop မှာ သူ့ရဲ့ Shortcut ထွက်လာပါလိမ့်မယ်....အဲ့ဒါလေးကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ...သူ့ Box ပွင့်လာရင် အပေါ်ထောင့်က OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ... အဲ့ဒီမှာ သူတွေ့တယ့် USB တွေ အကုန်လုံးကို Tab လေးတွေနဲ့
Posted by Linn Ko at 6:18 PM No comments:
ကိုယ့် Computer မှာ ရှိတယ့် အချက်အလက်လေးတွေကို ပြန်ကြည့်ချင်ရင် သုံးလို့ရပါတယ်... Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး... Double Click ခေါက်လိုက်တာနဲ့ သူ့ဟာသူ တွက်ချက်ပြီး ပေါ်လာမှာပါ... လိုချင်သူတွေ အတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ....
Posted by Linn Ko at 11:58 AM No comments:
Driver Genius Pro..(For Driver Backup)
အခု သုံးနေတယ့် Windows ကို အသစ် ပြန်တင်ချင်တယ်... Driver ခွေကလည်း မရှိတော့ဘူး ဆိုတယ့် သူတွေ အတွက်ပါ.... Driver Backup လုပ်လို့ရတယ့် Software (Full Version) လေး ပါ...Backup လုပ်ပြီးရင် Stick ထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းထားလို့ရပါတယ်...သုံးပုံကတော့ အရင်ဆုံး ဒီ Software လေးကို
WYZO Browser ပါ...Mozilla Firefox နဲ့ သုံးရတယ့် ပုံစံခြင်း ဆင်တူပါတယ်..သုံးရလည်းလွယ်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့် သူက သုံးရတယ် ပိုမြန်တယ်လို့တော့ ပြောကြတယ်..သုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ...ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ အခြား
Browser တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အတော်လေး သေးတယ်ဗျ 13 Megabytes ကျော်ကျော်လေးပဲ ရှိတယ်..
Posted by Linn Ko at 1:06 PM No comments:
Windows 8 အတွက် Activator လေးပါ...Windows 8 Activator Softwares လေးကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ...ပြီးရင် ခဏစောင့်လိုက်ပါ...အပေါ်မှာပြထားတယ့် ပုံလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.... အဲ့ဒီ အခါမှာ Windows 8 Install/Uninstall ဆိုတယ့် Button လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ..ပြီးရင်
Remove WAT 2.2.4 for activate your Windows 7
Windows7မှာ Windows Activate မဖြစ်ရင် ရက် ၃၀ ပဲ အသုံးပြုခွင့်ရကြပါတယ်...အဲ့ဒါတွေမဖြစ်တော့ အောင် ဒီ Software လေး သုံးကြရအောင်လား...
အသုံးပြုပုံက ရှင်းပါတယ်... ဒီ File လေးကို Double Click ခေါက်ပြီး ဖွင့်...ပြီးရင် အပေါ်ဆုံးက Remove
Posted by Linn Ko at 3:35 PM No comments:
Proxy ကျော်ရန် Proxy Server List
Proxy Server Lists တွေပါ... ဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့ တစ်ချို့ Websites တွေကိုဝင်လို့မရတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်...အဲ့ဒီ အခါမှာ အခုပေးထားတယ့် Website မှာ ပေးထားတယ့် Proxy လေးတွေကို ထည့်ပြီး သုံးရင် ဝင်လို့ရပါတယ် Connection တော့ နည်းနည်း နှေးသွားတတ်ပါတယ်...တစ်ချို့ကတော့
Posted by Linn Ko at 1:22 PM No comments:
ZawGyi Font 2008
ဇော်ဂျီ Font ပါ... Version 2008 ပါ...
Download လုပ်ချင်သူတွေအတွက် ဒီမှာနှိပ်ပါ...
Posted by Linn Ko at 12:11 PM No comments: